20 Kheyraadka Aasaasiga ah Nashqadee kasta oo ay tahay inuu ogaado | Abuurista khadka tooska ah
Melissa Perrotta | | Design Graphic, Qalabka Naqshadeynta, Khayraadka
Weligaa ma is weydiisay waa kuwee meelaha ugu wanaagsan ee la aado si looga helo ilo mashruucyadaada? Maqaalkan waxaan kuugu keenaynaa liis ah 20 goobo muhiim u ah naqshadeeye kasta oo garaaf ah meesha aad kala soo bixi karto Faylasha PSD ee bilaashka ah, dulinka, ficilada iyo jees jeeska.
Kaliya waxaad ubaahantahay dhagsii cinwaanka la tilmaamay. Sidoo kale, haddii aad iyaga jeceshahay, waad calaamadeyn kartaa bogga si loogu helo mashaariicdaada soo socda.
3 Qoraallada CG
4 Qaabab khiyaali ah
8 Waa maxayFont!
11 Sawirro Bilaash ah
13 Aaladda koronto dhaliyaha ee barnaamijyada
14 Kooxaha ka hortagga ah
15 Xakamaynta Jiifta 2
16 Raadka Saamaynta 3
17 Isku qas
18 Kaftan Zones
20 Miirayaasha Instagram
Tani waa meesha ugu habboon ee la raadinayo PSD jees jees, icons iyo nooc kasta oo kheyraad ah oo lagama maarmaan u ah nashqadahaaga.
Waad ku kalsoonaan kartaa degelkan marka aad go'aan ka gaarto waxa Palette midabka u isticmaal mashaariicdaada.
Meel ku habboon in kala soo bax sawirada noocyadooda kala duwan. Meeshan waxaad ka heli kartaa wax kasta oo laga bilaabo dabaqyada cusub iyo dabaqyada illaa walxaha iyo qaab dhismeedka.
Qaabab khiyaali ah
Markaad u baahan tahay inaad hesho qaabab iyo qaabab tayo sare leh meesha ugu fiican ee loogu talagalay waa Qaab-dhismeedka Sublte oo leh in ka badan 400 faylal ah.
Boggan dhowaan ayaa waxaa furay Adobe wuxuu siiyaa casharro ama koorsooyin naqshadayaasha bilowga ah ama ardayda barnaamijyada Adobe kala duwan.
Waa degel kuu oggolaanaya naqshadeeyaan oo dhisaan bog aan lahayn lambar.
Hadaad waligaa ubaahantahay abuur shabakado si aad u isticmaasho mashaariicdaada qaab dijitaal ah ama aad u daabacdo Gridzzly waa meesha ugu fiican.
Haddii aad aragtay font oo aadan garanayn waxa ay hadda tahay, waad ku mahadsan tahay What The Font. Kani waa degel kuu oggolaanaya qeexida aqoonsiga nooca qoraalka iyada oo loo marayo sawir JPG ama nooca PNG.
Waxay kaa caawinaysaa inaad dhiso bandhigyadaada Behance hal guji iyada oo loo marayo falalka Photoshop.
Qalabka loogu talagalay Photoshop oo kuu oggolaanaya tarjun qoraalada faylkaaga illaa luqado kale.
Bangigan sawirada hore loo oran jiray sxc.hu waxay bixisaa 395.000 oo sawir oo lagu soo dejiyo.
Noocyada wuxuu ku soo bandhigayaa noocyada la adeegsanayo websaydhka dhabta ah iyo macluumaadkeeda marka lagu daro bixinta talooyin ku saabsan ilo la mid ah.
Aaladda koronto dhaliyaha ee barnaamijyada
Qalabkan dib u habeyn oo habee naqshadahaaga astaanta ah dhammaan qaababka loo baahan yahay macruufka iyo Android.
Kooxaha ka hortagga ah
Mararka qaarkood way dhici kartaa marka aan ka shaqeyno Photoshop in aan tuujinno inay dhammaadeen kooxo kala duwanaan ah oo ku kala duwan qiimaha horay loo soo dejiyey Qalabkaani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad baabi'iso dhibaatadan si aad uhesho jadwal dhammaystiran.
Xakamaynta Lakabyada ayaa ah kordhin Photoshop leh 7 qoraal oo ka dhigaya maareynta lakabka mid fudud.
Raadka Saamaynta 3
Barnaamijkan oo si gaar ah loogu talagalay sawir qaadayaasha waad awoodaa tafatir sawirada si fudud oo dareen leh.
Kordhintan loogu talagalay Photoshop iyo Illustrator waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho kumanaan kheyraad ah adiga oo aan ka bixin barnaamijka.
Tani waa meesha ugu fiican ee laga helo jeesjeesyo badan oo kala duwan. Laga soo bilaabo Ipads, Iphone ilaa kaararka ganacsiga ama yunifoomka.
UI Cloud waa keydinta xogta interface ugu weyn adduunka oo leh in ka badan 46600 si loo soo dejiyo.
Tani waa xirmo ah Miirayaasha 13 taas oo la mid ah miirayaasha Instagram.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » 20 ilo muhiim ah naqshadeeye kasta waa inuu ogaadaa
Noocyada fanaaniinta taariikhiga ah ee kumbuyuutarkaaga